Wholesale Teen Vaping Yakaramba 29% muna 2020, CDC Survey Shows fekitori uye vagadziri | SMOORE
FEELM Tech Vhidhiyo
Chakavanzika Chekura Kwakakura
FEELM mukati mePurogiramu
Teen Vaping Yakaramba 29% muna 2020, CDC Ongororo Inoratidza
Mitsva mitsva yekuongorora yakaburitswa neCDC inoratidza kudonha kwepfumbamwe kubva muzana mukuyaruka kubva ku2019 kusvika 2020, kuchiunza kumatanho ekupedzisira akaonekwa pamberi pa2018.Zvechokwadi, CDC neDFA vakasarudza imwe nzira yekuburitsa mhedzisiro.
Mhedzisiro yakasarudzwa (asi kwete iyo data yavakabva) yaive chikamu cheCDC mushumo wakaburitswa munaSeptember 9 - zuva rimwe chetero raive zuva rekupedzisira revaputi vanogadzira kutumira Premarket Fodya Zvikumbiro kana kubvisa zvigadzirwa zvavo mumusika. Iyo data ichave iripo, pamwe nekuongororwa kweese mhedzisiro, imwe nguva muna Zvita.
Kushandiswa kwemazuva makumi matatu nemasere (kunonzi "kushandiswa kwazvino") pakati pevadzidzi vechikoro chesekondari kwakadonha kubva pa27.5 muzana kusvika 19.6 muzana, uye kudonha pakati pevadzidzi vepakati kwakatonyanya kushamisa, kubva pa10.5 kusvika ku4.7 muzana. Idzo inhau dzakanaka, handiti? Zvakanaka…
"Kunyangwe idzi data dzichiratidza kuderera kwekushandisa kweiyo e-fodya kubvira 2019," vaongorori veCDC neDFA vanonyora, "3.6 mamirioni vechidiki vekuUS vachiri kushandisa e-midzanga mu2020, uye pakati pevashandisi varipo, vanopfuura vasere mu10 vakataura vachishandisa midzanga yefodya. ”
Vanyori vanoratidza kuti nekuda kwekuti zvigadzirwa zvinonhuwira zvichiripo, kuyaruka kwevechidiki hakuzombofa kwakadzika kusvika padanho (zero) izvo zvinogutsa zvinodaidzwa neCDC neFDA kudzora poohbahs. Saka mushumo unoenda mune yakadzama tsananguro nezve izvo zvinwiwa zvavanofarira zveava vanoshandisa vashoma, vachicherekedza kuti michero, mindi, uye menthol ndiwo akanyanya kufarirwa mhando tavhu pakati pevose vapwere vapers. Chirevo chekuti mafiringi anotyaira kushandiswa nevechiri kuyaruka zvinonetesa, asi kumwe kuongorora kuri kunakidza.
Semuenzaniso, pakati pevashandisi vemazuva ano vemapoda uye macartridges, akanyanya kushandiswa mhando yekuravira yaive michero (66.0%; 920,000); mindi (57.5%; 800,000); menthol (44.5%; 620,000); zvihwitsi, madhiri, kana zvimwe zviwitsi (35.6%; 490,000). ”
Asi Juul Labs, iyo inogadzira iyo inonzi inonyanya kufarirwa vape pakati pevechidiki, yakanga yabvisa michero yavo yemichero kubva pamusika rinopfuura gore kuongororwa kusati kwapera. Hapana chimwe cheavo vakuru vepamutemo vagadziri vemapods akasarudzika vaitengesa michero- kana zvihwitsi-zvinonhuwira zvigadzirwa panguva yekuongorora futi. Izvi zvinoratidza kuti chidimbu hombe che "vashandisi vezvino" chaive kuputira grey- uye nhema-musika zvigadzirwa senge Juul-inoenderana pods inogadzirwa nevasina mvumo vagadziri.
"Chero bedzi chero e-midzanga yakasvinwa pamusika, vana vanozoisa maoko avo pairi uye hatigadzirise dambudziko iri," akadaro Mutungamiri weVatungamiriri veFodya Mahara, Matthew Myers. Ehe, izvo zvinoshanda kumusika mutema futi. Kurambidzwa kwemavhenekeri hakuzotungamira mukurega, kungotenga kubva kune matsva uye asina chokwadi masosi.
Chirevo cheCDC chinopa chirevo chekutaura kuti kushandiswa kwechigadzirwa kwakaraswa kwakakura kubva pa2,4 muzana muna 2019 kusvika pa26.5 muzana muna 2020 - chiuru chemazana kuwedzera! - Pasina kutsanangura kuti izvo zvigadzirwa zvaive zvakanyanya mhinduro yemusika mutema kusarudzo yepamutemo yevagadziri zvinwiwa, uye gare gare kune iyo Sarudzo yeDAA yekuisa pekutanga kumisikidzwa kune zvigadzirwa zvepod-based. (Pane fungidziro yekurangana yenyonganiso inoratidza kuti danho reDAA rekuregerera mhepo dzinogona kuraswa kubva munaJanuary 2020 yekumisikidza nhungamiro kwaive kuyedza kuona kana musika wevape usiri pamutemo ungapindura nekukurumidza. Zvakadaro.)
Chinokosha ndechekuti chikoro chesekondari vaping chakadonhedzwa neinenge chetatu, uye yepakati chikoro ichivhuvhuta neinopfuura hafu. Ichokwadi chekuti vanodarika makumi masere muzana vevechiri kuyaruka vanoshandisa zvinwiwa zvinopisa zvigadzirwa ishering tsvuku, nekuti isu tatoziva kuti vapombi vakuru vazhinji vanofarirawo zvinwiwa zvisiri zvefodya, uye izvo zvinwiwa hazvisi zvezvimwe zvikonzero zvinoita kuti vana vaedze vape.
Kune mamwe matambudziko neiyo NYTS padivi peiyo obsession nema flavour. CDC yabvisa yakatarwa mibvunzo nezve cannabis vaping kubva kuongororo, ichisiya vatori vechikamu kuti vasarudze kana mibvunzo yacho ichishanda kune ese ari maviri THC uye nicotine vapes. Hatizive kuti vangani vevana vari kutora ongororo iTHC vapers, nekuti CDC inofungidzira kuti vese vaputa chikakananda, uye vanotaura mhedzisiro sekunge ivo vari.
Zvingave izvo (zvine musoro zvikuru) kutya zvisiri pamutemo THC vape makoridho akakonzera "EVALI" kusundira vazhinji vezera rechikoro zera remafuta emafuta emagetsi kuti varege kushandisa izvo zvigadzirwa. Isu hatizive chete kuti yakakura sei chikamu chisina kukodzera mafuta hashi yakatamba mu2018-19 "vechidiki vaping denda," asi isu tinoziva kuti izvo zvigadzirwa zvaive zvichikurumidza kuwana mukuzivikanwa pakati pevechidiki vashandisi vecannabis panguva iyoyo chaiyo (2017-2019 ).
Rimwe dambudziko nemhedzisiro mhedzisiro: CDC yakafunga kusapa yekutanga 2020 nhamba dzekuputa. Gore rapfuura apfuura-makumi matatu emazuva emidzanga yekushandisa fodya yakadzikira kune-yenguva-nguva yakaderera ye5.8 muzana yevadzidzi vezvikoro zvepamusoro, uye ingori 2.3 muzana pakati pevadzidzi vepakati. Iko kuita kwakaenderera here mu2020 - kana kuderera kwemhepo kwakakonzera kuwedzera kunowirirana kwekufa kwefodya kunouraya? Hatizomboziva kusvika imwe nguva muna Zvita, nekuti chero chikonzero, CDC yaisada kuti tione izvo mhedzisiro izvozvi.
"Tsika" yekuburitsa chikamu chekutanga mhedzisiro kubva kuNYTS yakatanga muna 2018 naiye-FDA Commissioner Scott Gottlieb, uyo aida kuratidza chimwe chinhu chekongiri kutsigira kutaura kwake kwekuti "kunetsa" kwevechidiki kuyaruka maitiro kwaiitika. Asi akapedza mwedzi achigadzika danho asati aburitsa manhamba ekutsigira hurukuro yake yakasununguka.
"Ndinotenda kune denda rekushandiswa kwevechidiki," akadaro Gottlieb munaGunyana 11, 2018. "Tine chikonzero chakanaka chekutora mhedzisiro iyi zvichibva pane zvinoitika nedata zvatakaona, zvimwe zvacho zvichiri zvekutanga uye zvichave yakapedzwa mumwedzi inotevera uye yakaratidzwa pachena. ”
Gottlieb akatyisidzira kurambidza zvigadzirwa zvakagadzirwa uye kudhonza yakakurumbira c-chitoro pod vapes kubva pamusika. Kwapera vhiki, iyo FDA yakazivisa nyowani yekurwisa-vaping midhiya mushandirapamwe. Iyo yepakati yaive yekutengesa yeTV yakanzi "Epidemic," iyo pfungwa dzakapinza muhofisi yekudzora fodya kuDAA sezviri pachena yaifunga kuti yaizotyisidzira vechidiki vanotsvaga mafaro kubva pakupenga.
Pakatanga mhedzisiro ye2018 NYTS mhedzisiro yakazoburitswa munaNovember, midhiya enhau-yakasimudzwa naGottlieb, mushandirapamwe wekushambadzira, uye nekurira kusingaperi kwemapopaganda anopokana nemhepo kubva kumapoka anopesana nefodya - akanyungudika. Chikoro chepamusoro "chazvino kushandiswa" mwero wainge wasvetuka kubva pa11,7 kusvika pa20,8 muzana!
Izvo zvakange zvisina kuitwa nemasangano- nekuti ivo havana kuda kusvika-kwaive kupa mamiriro. Humbowo hwechirwere chinotyisa hwaive hwakanyanya hwakavakirwa pakushandisa kwemazuva makumi matatu apfuura, inova muyero unokatyamadza kuyera hunhu hwezvinodhaka. Kushandisa chimwe chinhu kamwe chete mumwedzi wapfuura hakusi humbowo hwekushandisa, ndoda kutaura "kupindwa muropa." Iyo inogona kuratidza kwete chimwe chinhu chinokanganisa kupfuura fad.
Kunyatso ongorora ye2018 NYTS mhedzisiro nevatsvagiri kubva kuNew York University (uye mamwe mayunivhesiti) yakaratidza kuti chete 0.4 muzana yevaongorori vatori vechikamu vanga vasina kumboshandisa zvimwe fodya zvigadzirwa uye vaped pamazuva makumi maviri kana anopfuura pamwedzi. Mune mamwe mazwi, kazhinji kazhinji echikoro chesekondari vapers vanga vatoputa.
"Vaping yakawedzera pakati pevechidiki veUS mu2018 pamusoro pa2017. Izvo zvinowedzera zvinoonekwa nemapatani ezasi [apfuura-mazuva makumi matatu] evhu frequency uye yakanyanya poly-chigadzirwa kushandiswa, uye huwandu hwakaderera hwekuputika pakati pevakawanda asi fodya naïve vapers," iyo vanyori vakapedzisa.
Kana iyo 2019 NYTS yakaratidza kumwe kuwedzera, kubva pa20,8 kusvika pa27.5 muzana, mhinduro inotyisa nevakuru nezvenhau yakafungidzirwa; yaingova ndangariro yemhasuru chete. Asi nyaya yanga isina kuchinja. Boka revadzidzi veBritish vakatarisa mhedzisiro yeese 2018 uye 2019 CDC ongororo dzakabvumirana nekuongororwa kweboka reNYU.
"Kakawanda kushandiswa kwakaitika mu0.0% yevamwe vashandisi vefodya vasina ruzivo muna 2018 uye 2.1% muna 2019," vakanyora. "Pakati pevashandisi vefodya vekare-mazuva makumi matatu e-cigaretti vashandisi mu2019, 8.7% vakashuma shuwa uye 2.9% vakataura vachida kushandisa mukati memaminitsi makumi matatu kubva pakumuka."
Mhedzisiro iyi hairatidze kuti vana "vakapindwa muropa" kana "vakapindwa muropa," seMushandirapamwe weVana Fodya-Mahara uye Chokwadi Initiative hwamanda muzvinyorwa zvavo. Yepfuura-30 zuva rekushandisa rinomiririra zvakanyanya kuyedza, kwete kujairira kushandisa. "Kupindwa muropa" hakuratidze kukwira kwembambo gore rimwe uye kudonha makumi matatu muzana muzana rinotevera - asi mafashoni evadiki anogara achisimuka nekudonha nekukurumidza muzvimiro zvakadaro.
Ichokwadi chisingataurwe ndechekuti vechidiki vekuAmerican havavhotere zvakanyanya kana zvakanyanya kusimba pane vanobva kuUK kana chero kumwe kunhu. Asi zviremera zveUS zvinotsanangura kuyaruka kuchipaza nenzira inotarisirwa kumutsa kutya muvakuru. Uye chero bedzi ivo vachikwanisa kuzadzisa izvo zvakatarwa mhedzisiro, hapana chingangoshanduka.
Kutanga Global Kutengesa "VIP Pass" ...
Tine "Chakavanzika Chekura Kwakakura ...
FEELM Inopenya paPasi Yakakura Kupfuura ...
SMOORE Rondedzero paHong Kong Stock Exchange
Zvakavanzika Zvakavanzika zveFEELM Atomization Techn ...
Steven Yang: Imwe Nhanho Kwangu, Imwe Giant L ...
Matanho masere ekurwisa COVID-19, FEELM iri R ...
FEELM Won iF Dhizaini Mubairo 2020 inyowani ...
Yakagadziridzwa Pod Solution
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Sitemap - AMP Mobile
Midzanga Yekupisa, E Midzanga Blister Pack, Kusvuta Imwe nzira, E Liquid Vapor Midzanga, Newport E Midzanga, Epen,